शाओमीले एमआई ११ स्मार्टफोन नेपालमा लन्च गर्दै, टिजर जारी, बजार मूल्य कति पर्ला - Technology Khabar
» शाओमीले एमआई ११ स्मार्टफोन नेपालमा लन्च गर्दै, टिजर जारी, बजार मूल्य कति पर्ला
शाओमीले एमआई ११ स्मार्टफोन नेपालमा लन्च गर्दै, टिजर जारी, बजार मूल्य कति पर्ला
शाओमीले पछिल्लो दिनमा निरन्तर आफ्ना नयाँ स्मार्टफोनहरुका साथै ग्याजेटहरु पनि लन्च गरिरहेको छ । यसैक्रममा कम्पनीले नेपाली बजारमा शाओमी एमआई ११ लन्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
कम्पनीले हालै एमआई ११ को टिजर इमेज सोसल मिडियामा सार्वजनिक गरेको छ। जसमा ११ लेखिएको देखिन्छ भने त्यसमा सिनेम्याटिक वल्र्डको बारेमा बताईएको छ ।
त्यसैगरि टिजर इमेजमा ह्यासट्यागका साथमा मुभीम्याजिक लेखिएको छ ।
Get ready for the #moviemagic asanew window to your cinematic world is opening.
Know what we are talking about? Comment below if you know the secret. #XiaomiNepal pic.twitter.com/mkyHsw2U4M
— Xiaomi Nepal #108MPQuadCamera (@XiaomiNepal) May 22, 2021
यसको अर्थ कम्पनीले छिटै नै एमआई ११ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च गर्ने योजना लिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हालै मात्र रेडमी सिरिजको र पोको सिरिजको नयाँ फोनहरु लन्च गरेको कम्पनीले आफ्नो फ्ल्यागशिप फोन बजारमा ल्याउन तयार रहेको छ ।
कम्पनी स्रोतकाअनुसार यहि मे महिनाको अन्त्यसम्ममा शाओमीले बजारमा एमआई ११ लन्च गर्नेछ ।
शाओमीले यो स्मार्टफोन सबैभन्दा पहिले चीनमा अघिल्लो वर्ष डिसेम्बरमा लन्च गरेको थियो भने यहि फेब्रुअरीमा विश्व बजारमा ग्लोबल संस्करण उपलब्ध गराएको थियो ।
शाओमी एमआई ११ स्न्यापड्रागन ८८८ प्रोसेसर जडित विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन हो । स्न्यापड्रागन ८८८ क्वालकमको नयाँ शक्तिशाली हाइइन्ड चिपसेट हो ।
नयाँ चिपसेट सहित एमआई ११ सिरिज परिष्कृत फिचरमा उपलब्ध छ । यो फोनको क्यामरा क्वालिटीमा सुधार गरिएको छ ।
क्वालकम स्न्यापड्रागन ८८८ प्रोसेसरले सीपीयू र आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स (एआई)को प्रफरमेन्स बोजोड छ । यो चिपसेटमा ६ औं जेनेरेसनको क्वालकम आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स इन्जिन, तेस्रो जेनेरेसनको एक्स ६० ५जी मोडेम–आरएफ सिस्टम र ट्रिप्पल आईएसपी छ ।
एमआई ११ स्मार्टफोन १२ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेजमा उपलब्ध छ भने बेस मोडल ८ जीबी र्याम र १२८ जीबी स्टोरेजसहित आएको छ । यो फ्ल्यागसिप फोनमा ४६०० एमएएचको ब्याट्री छ ।
फोनको क्यामरामा विशेष नाइट भिडियो मोड राखिएको छ । कम प्रकाशमा पनि यसले उत्कृष्ट फोटो खिच्न मद्दत गर्छ । एमआई ११ मा १०८ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामरा छ भने १३ मेगापिक्सेलको अल्ट्रा वाईड र ५ मेगापिक्सेलको टेलिफोटो सेन्सर छ । यस्को रियर क्यामराले एट के भिडियो ३० फ्रेम प्रति सेकेण्डमा खिच्न सक्दछ । त्यसैगरि सेल्फीका लागि २० मेगापिक्सेलको इन डिस्प्ले फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ ।
६.८१ इन्चको एमोलेड डिस्प्ले उक्त क्यूएचडीप्लस रिसोलुसनले १२० गीगाहर्ज रिफ्रेस रेट दिन्छ ।एसमा एचडीआर १० प्लस सपोर्ट रहेको छ भने कोर्निङ्ग गोरिल्ला ग्लास भिक्टसद्धारा स्क्रीनलाई सुरक्षित पारिएको छ । अन्य फिचरका रुपमा फोनमा वाईफाई–६ र एलपीडीडीआर ५ र्याम छ ।
ग्लोबल भर्सनमा कम्पनीले ५० वाटको वायरलेस चार्जिङ्ग सपोर्ट र ५५ वाटको टर्बो चार्जिङ्ग सपोर्टका साथ आउँछ । नेपालमा पनि कम्पनीले ग्लोबल भर्सनको फोन नै लन्च गर्नेछ ।
यो फोन विश्व बजारमा बेस भेरिएन्टको मूल्य ७४९ यूरो रहेको छ जसअनुसार नेपाली बजारमा करिब १ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ । तर कम्पनीले यसलाई १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यमा नै सार्वजनिक गर्ने योजना गरेको छ ।
एनआईसी एशिया डाइनामिक डेप्ट फण्डको इकाई अनलाइनमार्फत खरिद गर्न सकिने
वेब संस्थापक बर्नर्स लीले सोर्स कोडलाई एनएफटीको रुपमा लिलामी गर्ने
लगातार फोन कल आएर हैरान हुनुहुन्छ ? इन्फ्लाइट मोड अन नगरेर नै यसरी कल रोक्न सक्नुहुन्छ